News - Farqiga u ah ilaalinta dhirta isku-dhafka weyn ee deegaanka
Farqiga u ah ilaalinta dhirta isku-dhafka weyn ee deegaanka
Horumarka bulshada iyo horumarka sayniska iyo teknolojiyada, arrimaha ilaalinta deegaanka ayaa aad iyo aad u soo jiitay indhaha. Sanado badan oo shaqo adag ka dib, warshadda isku-dhafka ballaaran ee bey'adda u fiican waxay heshay natiijooyin bilow ah, astaamaheeda gaarka ahna waa sida soo socota:
1. Xakameynta si looga takhaluso ilaha wasakheynta
Control Xakamaynta boorka. Warshadda isku-dhafan ee bey'adda-u-habboon-baaxadda leh waxay korsataa isku-uruuriyaha boodhka si otomaatig ah u dhammaystira uruurinta boodhka, isla markaana si otomaatig ah u galiya boodhka la soo ururiyey nidaamka wax-soo-saarka ee qiyaasta isticmaalka, yaraynta wasakhda siigada ee labaad; aaladaha lagu buufiyo waxaa lagu habeeyay ciidda iyo quruurux si loo yareeyo howlgalka ciidda iyo quruurux Boodhka.
Treatment Daaweynta Biyaha Biyaha. Warshadda isku-dhafan ee bey'adda-u-habboon-waxay ku qalabeysan tahay kala-saar ciid-quruurux iyo nidaam dib-u-warshadayn biyo ah. Biyaha qashinka iyo hadhaaga qashinka ee ka soo baxa hawlgalka saldhigga isku dhafka ayaa laga soocay ciida iyo quruuruxa ka dib kala-gooyaha ciid-quruurux-jeex. Dib-u-gal nidaamka biyaha wax soo saarka si aad u gaarto eber soo saarista biyaha wasakhda ah iyo haraaga qashinka.
Control Xakamaynta buuqa. Warshad isku-dhafan oo baaxad weyn leh oo bey'adda u wanaagsan ayaa waxay qaadataa nidaam jajabinta quruurux si loo yareeyo awoodda mootada iyo buuqa; idaacadda oo dhan waxay qaadataa nidaamka mootada dhawaqa yar si loo yareeyo saameynta buuq ku leeyahay deegaanka. Qalabka gariirka iyo qalabka kale waxay ku xiran yihiin suufka gariirka si loo yareeyo buuqa gariirka.
2. Jaray dariiqa gudbinta
Habka ugu wax ku oolka badan ee dhir-isku-dhafka ballaaran ee bey'adda u roon si loo jaro gudbinta wasakheynta ayaa ah in lagu koobo saldhigga oo dhan. Isku soo koobiddu waxay si wax ku ool ah u go'doomisaa isha wasakheynta ka soo baxda deegaanka ku hareeraysan waxayna xakameysaa wasakhda meel bannaan, taas oo yareyneysa saameynta deegaanka.
3. Qurux badan
Quruxdu waa shuruudaha aasaasiga ah ee warshad isku-dhafan oo baaxad weyn leh oo bey'ada u wanaagsan. Isku soo wada duuboo, waxaa la dhihi karaa warshadda isku dhafka bey’ada u fiican ayaa ah warshad casri ah oo si fiican isugu darsanta farsamada isku dhafka, farsamada ilaalinta deegaanka iyo farshaxanka dhismaha. Qaab dhismeedka saldhigga oo dhan wuxuu leeyahay dareen qurux badan, wuxuu la jaan qaadayaa deegaanka ku xeeran, qorshayntuna waa macquul.
Isku soo wada duuboo, warshadda isku-dhafan ee bey'adda u fiican-waxay leedahay faa iidooyin buuxda waana mid gaar ah. Changli waxaa ka go'an cilmi baarista iyo horumarinta dhir cusub oo isku dhaf ah oo balaaran sanado badan, qaadashada ilaalinta deegaanka oo ah mas'uuliyadeeda, natiijooyinna way gaadhay. Haddii aad u baahan tahay inaad la tashato oo aad iibsato,
Qaybo ka Mashiinka Mashiinka la taaban karo, Isugeynta Nidaamka Dufcadda, Nidaamka isugeynta wadarta otomaatiga ah, Mashiinka Dufcaanta Isugeynta, Automatic Wadar Dufcaddii Bacriminta fiicni, Nidaamka Qiyaasta Wadarta Wadarta,